မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: January 2009
ဩော် ခက်ပါရော ညီမရယ် ။စာတွေ ကဗျာတွေ ဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြခံချင်ရင် အကောင်းဆုံးလို့ယူဆထားတာ
လေးတွေတော့ စုထားပေါ့ ။ညီမရဲ့ အမြင်ကို လက်ခံပါတယ် ။အကို့စာမျက်နှာရောက်ပြီး လန့်မသွားပါနဲ့ဦး ။အမြင်မတူ ရန်သူဆိုတဲ့အထဲမှာ မပါရိုးအမှန်ပါ ။
လူသူလေးပါး သိပ်မသိလိုက်ပဲ ကျမဆီရောက်လာတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုပါ။ပိုစ့်က ဒီမှာပါ။အဟောင်းဆိုတော့
ဘယ်သူမှသတိထားမိလိုက်မယ်မထင်လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ။နောက်ပြီး ကျမနားမလည်လို့။ရှင်းပြကြပါဦး။
ဒါကြောင့် နွေလှိုင်ဿုန်းရဲ့ အမြင်နဲ့ တင်ပြထားတာတွေကို ညီမလက်ခံပါတယ်။
အစ်ကို့စာမျက်နှာကိုမြင်ရုံနဲ့လဲ လန့်လဲ မလန့်ပါဘူး။အမြင်မတူလို့လဲ ရန်သူလို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။
စကားမစပ်၊ခုမှ ထူးထူးခြားခြားရောက်လာပြီး မန့်သွားတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပါ။
ကျမချစ်သော အစ်ကို၊အစ်မ၊မောင်လေး၊ညီမလေးများကို စိတ်အနှောက်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေခဲ့သော်
posted by mirror time 8:40 PM5comments
posted by mirror time 3:07 PM 18 comments
အများကြီးမဟုတ်၊နဲတော့လဲ မနဲပါ။ဒီလောက်လေးကိုပဲ နှင်းရယ်လို့နောက်တစ်ခါ ပြန်မြင်ရဖို့ မသေချာ။ဒါကြောင့် မနက်တုန်းက ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ မုန့်သွားစားကြဖိုိ့ အိပ်ယာကစောစောထဖြစ်တာနဲ့ရိုက်ထားဖြစ်တွကို
တင်ရင်း ဆားချက်လိုက်ပါတယ်။သေချာကြည့်မှမြင်ရမယ်ထင်တယ်။ကျမတော့ ကြည့်ရင်းက မျက်လုံးတွေ ၀ါးလာတယ်။
အရင်က အိမ်ပေါ်ကနေ ဂျက်ဆင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်၊ဒီနေ့မနက်မမြင်ရဘူး။
မဆီမဆိုင်...ကန်တော်ကြီးထဲသွားဖြစ်လို့ ရိုက်ထားတာလေးတွေပါ တင်လိုက်မယ်။
posted by mirror time 5:00 PM7comments
၀တ္တုတစ်အုပ်၊မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်၊ဂျာနယ် ၂စောင်၊ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်စ်တစ်အုပ်ကို ကျောပိုးအိတ်ထဲပစ်ထည့်ပြီး ကျမရဲ့ ပျင်းရိညည်းငွေ့ဖွယ်ခရီးကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အမေ့ကို ကျမခဏခဏပြောဖူးတယ်၊အမေ့အိမ်ကိုခဏခဏ
ပြန်လာချင်တယ်၊ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းခရီးကြီးကို ကားမစီးချင်ဘူးလို့....။
ခုလဲ ခါတိုင်း ၃ နာရီခရီးကို ခု ၄နာရီခွဲလောက်မောင်းမှရောက်တယ်။လူလဲ မျောက်လိုလို၊၀က်ဝံလိုလိုကို ဖြစ်လို့၊
ဖုံတွေက အလုံး၊အရင်းနဲ့ ၀င်လာတယ်။ကတ္တရာငြှော်နံ့ကလဲ ခေါင်းတွေတစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်လာတဲ့အထိ၊....။
အေးရှားဝေါဒ်ရဲ့ လမ်းပြုပြင်ရေးကလဲ မိုးပဲ ပြန်ကျတော့မယ်...။ခုထိ ကျောက်ကြီးခင်းတုန်းပဲ တွေ့ရတယ်။
ကားက လူကိုကလေးပုခက်ထဲထည့်သိပ်သလိုပဲ။ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ညိမ့်ညိမ့်လေးကိုဖြစ်လို့....။ဘာမှ မထူးဆန်းတော့တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ရန်ကုန်ကအထွက်မှာ ခဏလေးကြည့်ပြီးတော့ အိပ်လိုက်သွားလိုက်တယ်။
၉၃ မိုင်ခရီးကို ညနေသုံးနာရီကစထွက်တာည ၇ နာရီခွဲတော့ ရောက်ပါတယ်။လာကြိုမယ့်သူရယ်လို့ မရှိပါ။
ဧရာဝတီရဲ့ဆောင်းက ထင်ထားတာထက်ပိုအေးလွန်းပါတယ်။အပေါ်ထပ်အပါးလေးတစ်ထည်ပဲ ယူသွားတဲ့ကျမ ဟိုရောက်တော့မှ ဒုက္ခကောင်းကောင်းတွေ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမေ့အိမ်ဟာ ကျမအတွက် ဘာလိုအပ်ချက်မှ
အမေ့ရင်ငွေ့ဟာ တကယ်နွေးပါတယ်။(ဒါပေမယ့် ကျမဘယ်တုန်းကမှ အမေနဲ့ပွတ်သီးပွတ်သတ် မနေဖူးဘူး)
အမေ့အရိပ်ဟာ အမောတွေကို ပြေစေပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဖို့ အားတွေကိုရစေပါတယ်။မီးမလာလို့ အားပျက်နေတဲ့ အင်ဗာတာလေးကို အားသွားပြန်ဖြည့်ပြီး ကျမပြန်ရောက်လာပါပြီ။
ခု...ကျမအမေ့ကိုလွမ်းနေတယ်..။ပြန်လာစညနေတိုင်းဖြစ်နေကျ ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒိခံစားချက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း
ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ ကျမဘယ်တုန်းကမှ အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ငိုချင်ရဲ့လက်တို့ဖြစ်နေတာကို လာနောက်တဲ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေရင် စာတွေဆက်ရေးပါဦးမယ်...........။
posted by mirror time 5:30 PM9comments
ဘာလဲ ၁၁၊ဘာလဲ ၅
၁၁ ဆိုပြီး ၁၂ဖြစ်လိုဖြစ်လိုက်၊
သစ္စာမရှိတဲ့...အဲ့ဒိ ၅ တွေ.......။
posted by mirror time 9:57 PM 11 comments
နတ်မောက်မှာ ၇ လကျော်ကျော်နေခဲ့စဉ်...ကျမအတွက် အတွေ့အကြုံအထူးအဆန်းများစွာ ရခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့ အဝေးမှာပထမဆုံးခွဲနေဖူးတာလဲဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာတုန်းကလဲ အဝေးမှာဆိုပေမယ့်အချိန်မရွေးထပြန်လို့ရ
တယ်။အမေကလဲ သတိရရင် လိုက်လာလို့လွယ်တယ်။နတ်မောက်မှာတော့ အဲ့သလိုမဟုတ်တော့ဘူး။
ဆက်သွယ်ရေးစသဖြင့် အစစအရာရာခေါင်းပါးလွန်းပါတယ်။တစ်မြို့လုံးမှာ အများပြည်သူသုံးတယ်လီဖုန်းရယ်လို့
တစ်လုံးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒိ တစ်လုံးကလဲ ကြံ့ခိုင်ရေးရုံးမှာပဲ ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်စကားပြောနေရင် ဘေးကနေ
၅ယောက်၊၆ ယောက်လောက်က စောင့်နေတတ်ပါတယ်။အမေက စကားတွေအများကြီးပြောနေတဲ့ အခါ
ဒါမှမဟုတ် သူက သတိရကြောင်းလွမ်းကြောင်းတွေ ပြောနေရင် ကျမကလဲ သတိတွေရပြီး ဆို့လို့နင့်လို့
ဖြစ်နေရင်လဲ....ကြိတ်မှိတ်မြိုသိပ်ရုံမှ တပါးဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ သူတို့ဆီမှာလဲ ဒီဂျစ်တယ်ဖုန်းလိုင်းတွေ ချပေးတယ်လို့ကြားရတယ်။ထားပါတော့လေ...။
လိုရင်းက ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတောင် မသိတော့ဘူး။
နေရာသစ်၊အစာသစ်၊ရေအသစ်၊မြေအသစ်နဲ့ အကြေမြို့လေးမှာ နေခဲ့ရစဉ်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးပါပဲ...........။ကင်းတွေ၊မြွေတွေပေါတာ.....၊အညာဆောင်းက လွန်လွန်ကြူးကြူး
အေးလွန်းတာ၊နေ့လည်နေက ကျောကွဲလောက်အောင်ပူတာ၊လျှောက်တဲ့လမ်းပေါ်က သဲကပူတာ၊
နောက် အရက်သောက်တဲ့သူတွေပေါတာ....နဲ့ အရူးတွေ........အစုံပါပဲ...။အဲ့ဒိထဲကမှ အရူးသုံးယောက်
အကြောင်းလေးကို ပိုသတိရနေမိတယ်။သတိရသလောက်လေး ပြန်ရေးထားတာပါ။ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
တစ်ယောက်က ကျမနေတဲ့အိမ်ရဲ့ ခေါင်းရင်းကပ်ရပ်ခြံမှာ နေတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ၊ဘီကွမ်းနဲ့ MSc ပြီးပြီးသား ပညာတတ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရူးတဲ့အဖြစ်ရောက်သလဲတော့
ကျမ မသိပါဘူး။အဲ့ဒိ အမျိုးသမီးမှာ မိတူးဆိုတဲ့ ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။
သူမက မိုးလေးနဲနဲချုပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ မိတူး၊မိတူးဆိုပြီးဝမ်းခေါင်းခြစ်ပြီးတော့ကို အော်တော့တာ။
ကျမနားထဲမှာက မီးထွန်း၊မီးထွန်းပဲ ကြားနေတော့...။အော်...သူ့ကိုအမှောင်ထဲထားလို့များ မီးထွန်းခိုင်းနေသလားဆိုပြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်တွေးမိသေးတယ်...။နောက်တော့မှ မီးလာလဲ မီးထွန်း၊
မီးမလာလဲ မီးထွန်းဖြစ်နေတော့ ကျမရဲ့အိမ်ရှင်တွေကို မေးကြည့်တော့မှ သူ့ညီမကို အော်ခေါ်နေတာ ဖြစ်နေတယ်။
အော်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊တစ်ခါတစ်လေ ဘာတွေကို ဒေါတွေခီးသလဲမသိ၊အဆဲပေါင်းကို နားမခံသာအောင် ဆဲတော့တာ။သူ့ညီမ မိတူးလဲ ပါတယ်။နောက်တော့ ရဲစခန်းက စခန်းမှုးတွေလဲပါတယ်။ကျမအတွက်တော့
ညဘက် သူဆဲသမျှ မကြားချင်လဲ ကြား၊ကြားချင်လဲကြားဆိုတော့ မနက်ရောက်ရင် သူတို့မြို့လူတွေကို အဲ့ဒါ
ဘာလို့ဆဲတာလဲလို့ဆိုပြီး စပ်စုရတယ်။သူ့ကို တိုက်ထဲထည့်ပြီးပိတ်ထားလို့ ဆဲတာတဲ့လေ။
သူအပြင်ထွက်ချင်တယ်တဲ့။သူအမှောင်ထဲမှာချည်းပဲ နေရတာမွမ်းကြပ်လှပြီထင်ပါရဲ့....။ဒါပေမယ့် သူ့ကိုအဲ့ဒိ မီးခံတိုက်လို့ခေါ်တဲ့ သစ်သားလုံးဝမပါတဲ့ သံနဲ့ အုတ်ချည်းသက်သက်ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ပုပုလေးထဲကို ထည့်ထားခဲ့တာ၂ နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိ သူတစ်ခါမှ အပြင်မထွက်ရသေးပါဘူးတဲ့...........။
တစ်ညသားမှာတော့ ရယ်လဲရယ်ရ၊ကြောက်လဲကြောက်ရ၊သနားလဲ သနားရတဲ့ အသံတချို့ ကျမကြားခဲ့ရတယ်။
အချိန်က မနက် ၃ နာရီလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ထုံးစံအတိုင်း သူမ ဆဲသံနဲ့အတူ ကျမလန့်နိုးခဲ့တယ်။
စိတ်လဲတို၊ကြောက်လဲ ကြောက်ပေါ့။ညက နက်နက်မှာ သူ့အသံကလဲ အာခေါင်ခြစ်ပြီး အသံနက်နက်ကြီး
အော်နေတော့တာလေ...။ဆဲတာလဲ စုံလို့ပါပဲ...။တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ အဆဲတွေပါ..ကြားရတယ်။သူဆဲလွန်းတော့ မမိတူးလဲ မနေသာတော့ဘူးထင်ရဲ့။"ဟဲ့ဘာလဲ ဘာလုပ်မလို့ ဒီလောက်အော်နေတာလဲ" ဆိုတော့
ငါခေါက်ဆွဲပြုတ်သောက်ချင်လို့တဲ့.............။ဒါမဲ့ သူမသောက်ရပါဘူး။ဒီလောက်အေးနေတဲ့ညကြီးမှာ ဘယ်သူက သူ့ကို ခေါက်ဆွဲပြုတ်တိုက်လေမလဲ ကွယ်၊မမိတူးရဲ့ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အသံလဲကြားရော..........
သူ့အသံပျောက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒိတော့မှ ကျမလဲ သက်ပြင်းချပြီးပြန်အိပ်ရတယ်။
နောက်ညတွေကျတော့လဲ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ...ဆဲမြဲပဲ။ခေါက်ဆွဲပြုတ်တောင်းသံတော့ မကြားရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့
သူ့မှာ သိပ်အားကျစရာကောင်းတာတစ်ခုက နတ်မောက်တစ်မြို့လုံးမှာ သူ့ကိုဘယ်သူကမှ နိုင်အောင် ချက်စ်မကစားနိုင်ကြဘူးတဲ့လေ.....။ဘယ်လောက် ထူးဆန်းလဲ..။ပုံကခပ်အေးအေးရယ်။ဘယ်သူမေးမေး
သူက သင်မပြဘူးတဲ့။ဆိုက်ကားဂိတ်၊မြင်းလှည်းဂိတ်၊ကားဂိတ်တွေမှာ သူအမြဲရှိတယ်။ကြုံရာလူနဲ့ ချက်စ်ကစားတယ်။မိုးလင်းတာနဲ့ ပိုက်ဆံတစ်ရာရအောင် တွေ့ရာလူဆီကနေ တောင်းတယ်။
တောင်းတာတောင် သူကရမယ့်လူဆီကမှ တောင်းတာ။
တစ်ရာ ရတာနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ဒိုးရော။လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကျတော့လဲ အဖျော်ဆရာဖျော်ပေးတဲ့ လက်ဘက်ရည်ကို မသောက်ဘူး။ဆိုင်ရှင်ရဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ချစ်စရာ အညာသူဖြူဖြူလေးတစ်ယောက်
ရှိတယ်။သူဖျော်ပေးမှ။သူ့ရဲ့ ဖိုက်ဘာခွက် အစိမ်းလေးကိုကိုင်ပြီး အဖျော်ခန်းဘေးမှာ ကပ်ရပ်နေတော့တာ။
ကောင်မလေး ထွက်လာပြီး ဖျော်မပေးမချင်း စောင့်တော့တာပဲ...။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ဘယ်သူ့ကမှ မသိကြဘူး။လက်ဘက်ရည်ရတာနဲ့ လမ်းဘေးတစ်နေရာက မလေးရှားပိတောက်ပင်လေးတစ်ပင်အောက်
သွားပြီ ထိုင်သောက်နေရော............။နေ့လည်တစ်ခါ၊ညနေစောင်းတစ်ခါ...ဒီလိုပဲ သူ့ဆာလောင်မှုက...။
အဲ့ဒိ အဘိုးအိုရဲ့ ခါးမှာ ပုဆိုးတစ်ထည်ကို သိုင်းပြီးချည်ထားတယ်။အထဲမှာ သူ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်။မြွေရေခွံ
အိတ်ခွံတွေလဲ တွေ့တယ်။အရောင်မရှိတော့လောက်အောင် ညစ်ပတ်နေတဲ့အညာစောင်အရိအရွဲလေး
တစ်ပိုင်းလဲ ပါတယ်။နောက် သူလက်ဘက်ရည်ထည့်သောက်နေကျ မတ်ခွက်အစိမ်းလေးရယ်...။ဒါပဲ ပါတယ်။ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ရဲ့။
ကျမလေ...တခါတခါ သူ့ဘ၀ကို အားကျမိတယ်။သူ့ဘ၀ ဘယ်လောက်ရိုးစင်းလိုက်သလဲ၊ဂုဏ်မရှိ၊ပကာသနမရှိ၊
တစ်ခုခု ဆာလာရင် ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းလိုက်ရုံပဲ...။သူ့မှာ အစားအစာဆာလောင်မှုကလွဲရင် တခြားဘာမှ
နောက်ဆုံး အရူးတစ်ယောက်က အမျိုးသမီး။သူကတော့ ကျမတစ်ယောက်ထဲတင်မဟုတ်၊ကျမတို့ တစ်ရုံးလုံးကိုပါ ရယ်အားထက် ငိုအားသန် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆီရောက်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒိနေ့က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ အထဲမှာ ယောက်ျား၊မိန်းမ လူစုံတက်စုံလဲရှိတယ်။ကိုမျိုးဝင်းဆိုတဲ့ အစ်ကိုတော်တစ်ယောက်လဲ ပါတယ်။အဲ့ဒိဆရာသမားက ညနေလေးစောင်းရုံပဲရှိသေးတယ်၊
တစ်ညနေ ကျမတို့တွေ ထိုင်နေကျ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှ ထိုင်နေကြတယ်။လမ်းဆုံဘက်ကနေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အော်ကာ၊ဟစ်ကာနဲ့ အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ကျမတို့ဘက်ဆီလျှောက်လာတယ်။
သူက ဟဲ့ မျိုးဝင်း...သေနာကောင်၊နင်ပြန်လာခဲ့ နင်နဲ့ငါနဲ့ တွေ့မယ်...ကလေက၀ မြာပွေတဲ့အကောင်....စသဖြင့် ဘာဖြစ်တယ်။ညာဖြစ်တယ်စုံပလုံကို စေ့နေအောင် ကလော်ဆဲပြီးလာတာ။
အဲ့ဒိအချိန် ကျမတို့ဝိုင်းက ကိုမျိုးဝင်းကြီးတစ်ယောက်က ဟင်၊ဟန်ဘယ်သူလဲသူကနဲ့..မျက်နှာကရဲတွတ်နေပြီ။
အဲ့ဒိ အမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။သူ ဘယ်မျိုးဝင်းကိုဆဲနေတာလဲ ဆိုတာလဲမသိရ၊တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်တွေအနားကိုရောက်လာပြီ။လန့်လဲ လန့်နေကြပြီ။အဲ့ဒိမှာ အဖြစ်က
ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ အမျိုးသမီးက ကန်တော့ပါရဲ့ သူ့လုံချည်ကို စင်စင်ပါအောင် လှန်ပစ်လိုက်ပါလေရော....။
ကိုမျိုးဝင်းတွင် မဟုတ်၊ကျန်တဲ့သူတွေပါ....ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါလေရော...............။
တစ်ခါ၊နှစ်ခါ မကကို စိတ်ရှိတိုင်းလုပ်နေတော့တာ..............။နောက်တော့မှ စပ်စုကြည့်ကြတော့
ဒါကြောင့် စိတ်နာနာနဲ့ စွတ်တင်နေတာလား အစ်မကြီးရယ်....ပေါ့...။အဲ့လို.............။
အညာဆောင်းက လူကောင်းတောင် ရူးချင်ချင့်ရယ်။နဂိုအခံရှိပြီးသား လူတွေအတွက်တော့ သွက်သွက်ကို
ခါတော့တာပါပဲ......................။အထူးသဖြင့် ဒီအချိန်ပေါ့။နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ.....လတွေဟာ အအေးဆုံးအချိန် ဖြစ်သလို၊လေရူးလဲတကယ်ပွေတဲ့အချိန်ပါပဲ...။
ဒီစာကိုရေးရင်းကပဲ တွေးမိတယ်။မနက်လင်းတိုင်း မျက်နှာကို လာလာထိခတ်တတ်တဲ့ မထီတရီဆောင်းလေကို တယုတယလုပ်ချင်တဲ့၊အတိတ်ကိုပြန်ပြန်ဆွပြီး လွမ်းနေတတ်တဲ့ကျမကိုလဲ ဒီစာရင်းထဲထည့်မယ်ဆိုရင်တော့
ဒီပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကို အရူးလေးယောက်ရှိလေသည် လို့ နာမည်ပြောင်းရကောင်းမလားပဲ..........။
သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ..........။
အညာမြေကို လွမ်းရင်းဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုများရှိက ကျမရဲ့ မှားယွင်းမှုသာဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံတောင်းပန်အပ်ပါသည်။
posted by mirror time 6:19 PM9comments
ကြေကွဲတာလဲ မရှိ၊ပီတိလဲ မရှိ..........။
posted by mirror time 5:35 PM 8 comments
posted by mirror time 2:34 PM9comments
ကြာပြီနဲ့မို့...ဒီလထုတ်ချယ်ရီမှာ ပါတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနားလည်လက်ခံပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ်ခုပြီးတစ်ခု မပြည့်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘကြီးထဲ
ငါးစာတပ်ပြီး မျှားနေရတဲ့ မြစ်ပြင်ထဲမှာ
အာဟာရနဲ့ ထောက်ကူပေးထားရတဲ့ အရေပြား
ရေခဲသေတ္တာထဲက တစ်ရေးနိုးလာတဲ့ အသားတစ်စ
" ဟေ့လူကြီး ခင်ဗျားဘာသောက်မှာလဲ"
ငါပေးခဲ့တဲ့ အချစ်နာမည်မပြောင်းလိုက်နဲ့ ကေသီ
ငါပေးခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ် ၂၃ အင်္ကျီပြန်မပေးခဲ့ပါနဲ့ ဂျော်နီ
ငါဖြောင့်ပေးခဲ့တဲ့ အချစ်ဆံပင် ပြန်မကောက်လိုက်ပါနဲ့ ဟန်နီ။
posted by mirror time 1:15 PM6comments
ကြွားတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ကြပါ။ကျမလတ်တလော ရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်တစ်ခု၊စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့မော...ဒယ်..
ဆိုတဲ့ပိုစ့်ထဲက တချို့စာသားတွေကို ပြည်တွင်းအယ်ဒီတာတစ်ယောက်က တောင်းယူပြီး သူတို့ဂျာနယ်မှာ
ကျမပြန်ပြန်ဖတ်နေမိတယ်။ကျမရဲ့ပိုစ့်က စာပိုဒ်2ပိုဒ်လောက်ပဲယူသုံးထားတာပါ။မြန်မာမိုန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ အမြင်ဆိုပြီး သူသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
၀မ်းသာလို့မဆုံးပါဘူး။ဒါတောင် ဂျာနယ်မှာပါတာမို့ပါ။တကယ်လို့ မဂ္ဂဇင်းတွေဘာတွေမှာသာပါလာရင် ကျမအငွေ့များပျံသွားမလား....:)
၀မ်းသာရတဲ့အကြောင်းတွေက တကူးတကန့်ဝယ်နားထောင်တာမဟုတ်ဘဲ ဒီအသံတွေကြားရရုံနဲ့ ဒီလို
စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကျမတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ဒီလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပြီး
စည်းလုံးကြမယ်ဆိုရင် မကောင်းမှုတွေ ပါးရှားသွားလောက်တယ်လို့တွေးမိလို့ပါ..။
လူငယ်တယောက်က လူငယ်ထုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်လည်ဝေဖန်ထားတာပါ..။
posted by mirror time 5:29 PM 18 comments
ညတုန်းက ဘောလုံးပွဲတစ်ညလုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီး အစ်ကိုလုပ်သူကို ညီမဖို့ကွမ်းယာအဆိမ့် 200ဖိုးဝယ်လာပေး
ခဲ့ဆိုပြီး မှာခဲ့လိုက်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ ဘာဘောလုံးပွဲမှလဲ မကြည့်နိုင်တော့ပါဘူး၊မနေ့က တစ်နေ့လုံး မနက် ၇ ကနေတက်ရတဲ့ သင်တန်းဟာ ည ၈ နာရီမှပြီးတယ်။အင်တာနက်လေးခဏလာသုံးပြီးပြန်၊ကွမ်းလေး နှစ်ယာလောက်လဲ ၀ါးပြီးရော၊လူက ကျိုးသွားပြီ။မရတော့၊သွားတိုက်ပြီး အိပ်လိုက်ရတယ်။ကိုယ်လဲ ကွမ်းမစားတာကြာပြီးကာမှ ပြန်စားဖြစ်တော့ အရင်တုန်းက ဆေးလိပ်နဲ့လူများဆိုတဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ရေးဖူးတုန်းက သူငယ်ချင်းက "လုပ်ပါဦးကွမ်းအကြောင်းလေးလဲ နဲနဲပါးပါး.." လို့ပြောဖူးထားခဲ့တာ သတိရမိတယ်...။နဲနဲပါးပါးပဲ ရေးမယ်နော်..။အများကြီးဖတ်နေရရင် ပျင်းနေမှာ မြင်ယောင်ပြီး အားနာလို့..။
အမေက အဖေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း အသက် ၄၀ အရွယ်ထဲက ဆေးလိပ်ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ခဲ့တာ။နင့်အဖေက ပြောဖူးတယ်။ငါ့ကိုသာပြတ်မယ်။ဆေးလိပ်ကိုတော့ မပြတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမယ့်လဲ သေမယ့်ရောဂါရလာတော့
ဆေးလိပ်လဲပြတ်ခဲ့ရတာပါပဲ...ခုတော့ သူပြတ်တဲ့ဆေးလိပ်ကို ငါကဖြတ်မရတော့ဘူးလို့ ပြောတတ်တယ်..။
နောက်တော့ ကျမအသက် 11 နှစ်မှာ ပုသိမ်ဆေးရုံမှာ ၂ လလောက်ဆေးရုံတက်ရတယ်။အဲ့တော့မှ အမေလဲ ဆေးလိပ်ပြတ်သွားတော့တယ်။ဆရာဝန်တွေဆဲမှာကိုသူကြောက်ပုံရတယ်။ဆေးရုံစတက်ခါစရက်တွေတုန်း
ကတော့ သူအပြင်ကိုထွက်ထွက်ပြီးခိုးခိုးသောက်ရှာတယ်။နောက်တော့ ကျမရောဂါကသည်းလာတော့ သူလဲ
ကောင်းနေလိုက်မလဲ။အဖေ့တုန်းကလဲ ပုသိမ်ဆေးရုံရဲ့ နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း ၀ါဒ့်မှာပဲတက်ခဲ့ရတာ။
ကျမကျတော့လဲ အဲ့ဒိဝါ့ဒ်မှာပဲ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ၇ နှစ်လောက်ပဲခြားတယ်..။အမေဟာ
ပုသိမ်ကအပြန်၊လွန်ခဲ့တဲ့ 13 နှစ်လောက်ထဲက ပုသိမ်ရွှေမုဠောဘုရားမှာဝယ်ခဲ့တဲ့ ကွမ်းအစ်ကြီးကခုချိန်ထိ
လက်ထဲရောက်ပြီးသား။နောက်တော့ သူ့သားကမိန်းမလဲပိုးရော(လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က)သူပိုးတဲ့မိန်းကလေး
လှည့်မကြည့်တော့လို့ဆိုပြီး ကျမအမေမှာ ၀မ်းနည်းလိုက်ရတာ။
ကျမက အမေရယ်အမေ့သားအဲ့ကောင်မလေးကိုရကြည့်..ပြန်စားမှာ စိတ်မပူနဲ့လို့ကို ဖျောင်းဖျရတယ်။သူ့သားက မိန်းမစကားနားထောင်တာနဲ့ တစ်သက်လုံးစားလာတဲ့ကွမ်းကိုတောင်ဖြတ်ပြီလို့ ထင်ပြီးအမေက၀မ်းနည်းတာ။
ဲ့အထိက ပြန်စားနေပီ။ခုတော့လဲ သားအမိနှစ်ယောက်ပြန်အဆင်ပြေနေကြပုံပဲ..။
ကျမက အမေရယ်..အသက်လဲကြီးပြီ..ကွမ်းစားတာလေးလျှော့ပါဦးဆို..အိုညည်းအေ..ကွမ်းစာတာက ဘာဥပါဒ်မှ
မဖြစ်ပါဘူး။အလွန်အကျွံမှမဟုတ်တာ..။ရုပ်လဲမဆိုးဘူး၊ဆေးလိပ်လို အနံ့လဲမထွက်ဘူး။ကြိုက်တတ်ရင် ကွမ်းနံ့က
မွှေးတောင်မွှေးသေးတယ်..ဆိုပဲ။တကယ်လဲ အမေကကွမ်းကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားတာပါ..။
ကျမတစ်ခေါက်တစ်ကျင်းပြန်လို့ စားချင်တယ်ဆိုလဲ ဈေးသွားတာနဲ့ စမုံစပါးတွေ၊ဖာလာတွေ၊လေးညှင်းတွေ ၀ယ်ချလာပြီး ကျွေးတော့တာ...။ကျမစိတ်ထင် အမေယာကျွေးတဲ့ကွမ်းက တခြားကွမ်းတွေထက် ပိုဆိမ့်တယ်
ကျမသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ကွမ်းစားတတ်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ဟိုတစ်လောက စင်ကာပူကပြန်လာတဲ့
ကောင်ကဟာဖိုးဒီနင်ဟာလေ..မရှက်ဘူးလား..ပါးစပ်ကလဲ အရဲလိုက်နဲ့တဲ့ ဆိုပြီးကဲ့ရဲ့တာတောင်ခံရသေးတယ်။သူကတော့ ဘုရားစူးယောက်ျားလေးပါ..။နောက်ထပ်ကွမ်းစားတဲ့သူ ဘယ်သူတွေရှိမလဲ။
နယ်က ဘော်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ စားကြတယ်။ဘလောဂ့်ဂါတွေထဲမှာဆို တောကျောင်းဆရာလဲစားတယ်၊
မောင်မျိုးလဲ စားတယ်(ထင်တယ်)ကိုငြိမ်းစုကြီးလဲ စားတယ်..။ကွမ်းလေးမြုံ့ရင်းမှ စာရေးရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်
ကားဆရာတွေအတွက်တော့ ကွမ်းဝါးတာက အသက်စောင့်ဆေးတစ်ခုပဲ၊သူတို့က ကွမ်းလေးဝါးနေမှမငိုက်တာဆိုပဲ..။ကွမ်းလေးကြိတ်ကြိတ်ဝါးရင်းကပဲ မိုင်ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ခရီးဆန့်ကြတာ...။
ကျမအစ်ကို ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က ကျမတို့မြို့မှာ ကွမ်း၊ကွမ်းသီး၊ဆေး၊၄င်းနှင့်အထွေထွေဆိုပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်
ဖွင့်ထားတယ်..။သူဆီရောက်လဲ ကျမက ကောက်ဝါးလိုက်တာပဲ။သူတော်တော်ပြေလည်နေတာတွေ့တော့
ခေတ်မမှီတော့ဘူးလေ."တဲ့..အင်းဒါလဲဟုတ်တာပဲ..။ကျမတစ်ခါတစ်လေစားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...ကဲ ခေတ်မှီရအောင် ခုပဲ ကောက်ဝါးလိုက်ကြပါစို့လား..........:)
posted by mirror time 3:39 PM 12 comments
ရဲ့လကို ကျမတစ်ဝကြီးခံစားလိုက်ရတယ်...။ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ရမှာက ကျမငှားလာတဲ့ကားဆရာပါ။
ွကျွန်းတောလမ်းတစ်လျောက်မောင်းလာပြီး ကားပွဲစားတန်းကိုဖြတ်လဲ ကျမနေရာရောက်တာကို ဆရာသမားက ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းထိပတ်တော့ ကျမစိတ်ထဲ"အော်..ကြာလိုက်တာ.ဒီလူ့နှယ်." ပေါ့..။နောက်တော့မှ ကျေးဇူးပါ..ဦးလေးကြီးရယ်..ပေါ့။သူအဲ့လိုမောင်းခဲ့လို့ကျမအတွက်တွေးစရာနဲ့လွမ်းစရာအကြောင်းလေးတွေ
လရောင်ကို ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်စေတဲ့ မြို့ပြညတွေထဲကျမဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ ကြာလှပြီ...။လရောင်ဆိုတာ ဘာလဲမသိတော့တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ၊တောင်ကြီးသွားတုန်းက တောင်ကြို၊တောင်ကြားက ထွက်ထွက်ချလာတဲ့
လကိုကြည့်ခဲ့ရတာ နောက်ဆုံးပဲ။ဒီနောက်တော့ ကိုယ်လဲသူ့ မေ့နေခဲ့။သူလဲ ကိုယ့်ကိုမျက်နှာမပြနိုင်ခဲ့ပါ...။
ခုတော့....လရောင်က ....လိပ်ခုံး၊ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ဟောင်းတို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ထိကပါး၊ရိကပါးနဲ့..။ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကြီးကလဲ ထီးထီးမားမား၊ရေတမာတွေဝန်းလို့၊ရံလို့....။
သူ့နောက်ဘက်မှာ ဘာတွေရှိနေမလဲ...။ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေရဲ့ တခြားကျန်နေသေးတဲ့ အဆောင်တွေ..။ပြောရရင် ပညာရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားဘ၀အရသာ အပြည့်အ၀ပေးနိုင်သေးတဲ့ကျောင်းပဲ။(မြို့ထဲမှာလဲရှိနေတဲ့ကျောင်း)စိတ်ထဲမှာတေးမှတ်ထားလိုက်တယ်..။
ဒီနှစ် ဆယ်တန်းဖြေမယ့်တူမလေးကို ဒီကျောင်းတက်ခိုင်းမယ်လို့...။
ခုချိန်ဆို အဆောင်ပေါ်ကကျောင်းသူတွေ စုဖွဲ့ပြီး နေကြာစေ့ တစ်ဖောက်ဖောက်နဲ့ လရောင်ကို အပူအပင်မဲ့..........။
သူတို့ကြားထဲမှာ လနဲ့ညရဲ့ အလှကို ပျက်လောက်တဲ့စေတဲ့ ပုံဆိုးဆိုးနဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းလဲရှိနေဦးမယ်..
သူလဲလရောင်အောက်မှ စိုးထိတ်ကြောက်ရွံ့စွာ ရှိနေမလား။အဲ့ဒိကျောင်းလေးကိုလဲ ကျမလွမ်းမိပါတယ်..။
ကျမရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀ တစ်ဝက်လုံးကို အဲ့ဒိကျောင်းဆောင်ခပ်စုတ်စုတ်လေးထဲမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာ...။
ကြက်ခြံ၊ဘဲခြံ၊၀က်ခြံတဲ့....။ဘယ်သူပေးသွားခဲ့တဲ့နာမည်တွေလဲ။အမှန်ဆို စပယ်၊ခရေ နဲ့စန္ဒကူး..
အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလား...။ဒါပေမယ့်ကျမစိတ်ကူးထဲက နာမည်တွေနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့
မေဂျာသုံးခု၊ခြံသုံးခြံ နဲ့ ခပ်စုတ်စုတ်ခုံလေးတွေနဲ့ တက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်း...၊ကျောင်းလို့ခေါ်သော်ရ၏ ဆိုတဲ့ကျောင်းမှာ ၄ နှစ်လောက်အချိန်ဖြုန်းခဲ့ရတဲ့ ၊အဲ့ဒိအချိန်တွေကို သိပ်နာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသူလေး
တစ်ယောက်ကတော့ အဲ့ခြံလေးတွေနားကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ချင်သေးတယ်..။
တစ်နေ့တော့ ရောက်မှာပေါ့လို့လဲ အားတင်းမိတယ်..။
posted by mirror time 10:31 PM3comments
posted by mirror time 8:35 PM5comments
ကျမ မမှတ်မိနိုင်တော့၊ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေကို ကျမပြန်တွေးကြည့်နေမိတယ်။ကျမရဲ့ လက်စွဲတော်
Hokaido စက်ဘီးလေးကတော့သူ့သခင်ပြန်လာတာမြင်တာနဲ့ ပျော်နေတယ်လို့ ကျမထင်တယ်…။
အဲ့ဒိစက်ဘီးလေးကို ကောက်နင်းပြီး ကျမထွက်လာခဲ့တာ။နောက်ပြီး ကျမမောင့်ကိုဒီနားလမ်းမလေးဘေးမှာ
ဒီလမ်းလေးကိုပဲ ကားတွေက ဖြတ်သန်းသွားလာကြတယ်။မြို့လေးကိုတော့ ကွေ့ရှောင်သွားတတ်တယ်။
ဘာပဲပြောပြော ခုကျမအဲ့ဒိလမ်းလေးပေါ်မှာ ရောက်နှင့်နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒိလမ်းလေးဟာ ဒီမြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့ အချောမွတ်ဆုံးလမ်းအပိုင်းလို့ပြောရင်လဲရတယ်။လမ်းဘေးမှာ စီစီရီရီပေါက်နေတာက ကုက္ကိုလ်ပင်တွေ….။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုက္ကိုလ်ရွက်တွေနဲနဲလာပြီး၊ညောင်ရွက်တွေက အစားထိုးနေရာယူလာတာ….။
ကုက္ကိုလ်ပင်တန်းတွေရဲ့ခပ်လှန်းလှန်းမှာတော့ ၀ါတစ်ကွက်၊စိမ်းတစ်ကွက်၊ပြာတစ်ကွက်နဲ့ စပါးခင်းတွေ...
လေတင်လေအောက်မို့ ထင်ရဲ့။သူတို့စကားသံတွေကို တော်တော်ပီပီသသကြားနေရတယ်။
ဟဲ့ အဲ့ဒါဒေါ်အ၀ှာရဲ့သမီးလေဟယ်..။ဟိုမုဆိုးမလေဟယ်။အယ်..နင်ကလဲ သူ့အစ်ကိုက ဟိုသူဌေးသမီးနဲ့ ယူလိုက်တာလေဟယ်၊ဘာကြာသေးလို့လဲ။အံမယ်လေး အပိုင်နော်၊အပိုင်၊မပိုင်ရင်ခြင်တောင်
ရိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး အေးလေ အဲ့ဒါသူ့ညီမလေ၊အငယ်ဆုံး၊အငယ်ဆုံး၊
သူ့မအေကြီးကလဲ မေးရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတတ်တာလေ။ခဏ၊ခဏမေးတော့လဲမကြိုက်ဘူးတော်ရေ့ သိလား။
ကိုမှ သွားမေးရတာလဲ။ကျမအမေကို အဲ့ဒိနည်းနဲ့တော့ မနှိပ်စက်ကြပါနဲ့။ကျမအမေက ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ
မကောင်းကြံစည်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ကျမအမေက တကယ့်အရိုးခံနဲ့ တောသူကြီးပါ။ရှင်တို့လိုပဲလယ်ထဲမှာနေ၊
လယ်ထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာ။ဒါပေမယ့် ကျမအမေကရှင်တို့လို သူများအကြောင်းကို အချိန်ကုန်ခံပြီး
မပြောပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်လဲ မပြောဘူး၊သူများလာပြောရင်လဲ အားမနာတမ်းအော်လွှတ်တတ်တာ။
ကွမ်းလေးတမြုံ့မြုံ့နဲ့ ကျမအမေကို ဒီအတိုင်းလေးပဲ ကျမကအေးအေးဆေးဆေးနေစေ့ချင်တာပါ။ရှင်တို့ရဲ့ အဲ့ဒိလို အရည်မရ၊အဖတ်မရစကားတွေနဲ့တော့ ကျမအမေကိုစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးနော်။ဒါပေမယ့် ဒီစကားတွေက
ကျမစိတ်ထဲက ပြောနေမိတာတွေပါ။တကယ့်အပြင်မှာတော့ ကျမဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။
ကျမမျှော်နေတယ်။သူ့ကို၊သူခုထိပေါ်မလားသေးဘူး၊ခဏနေရင် အနောက်ရိုးမဆီကိုနေ၀င်ပြီး အမှောင်
နင်ခုလာမှ ငါတို့တွေ့ရမယ်။နင်ခုလာမှငါတို့ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စက်ဘီးတူတူစီးရမှာ၊နင်လာတော့ လာမှာပါနော်။
နင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်း၊နောက်ပြီး နင်နဲ့ငါ စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့ ဒီလမ်းလေးပေါ်မှာခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန
်စီးနေကြတဲ့အကြောင်း၊မှောင်ရီပြိုးပြကြတော့မှ ငါတို့လမ်းခွဲသွားတဲ့အကြောင်း၊သူတို့တွေ တစ်မြို့လုံးတစ်ရွာလုံး
အနှံ့ လိုက်ပြောကြလိမ့်ဦးမယ်။ငါ့အမေဆီကိုတော့အဲ့ဒိစကားက တော်တော်နောက်ကျပြီးမှရောက်သွား
လိမ့်မယ်။မောင်…ငါနင့်ကိုခုချိန်မှာ တကယ်တွေ့ချင်နေတယ်ဟာ။ငါ့မှာ နင့်ကိုပြောစရာစကားတွေနဲ့ ရင်တစ်ခုလုံးလဲပွက်ပွက်ညံနေပြီမောင်ရဲ့။ငါနင့်ကိုပြောပြချင်တယ်။ငါ့အိပ်မက်တွေအကြောင်း၊ငါ့မျှော်လင့်ချက်တွေ
ချင်တယ်။အဲ့ဒိအခါကျရင် ငါအမြဲဆရာလုပ်တာခံရနေကျ နင်က ငါ့ညာဘက်နားရွက်ကိုခပ်နာနာလေးဖြစ်သွား
အောင်ဆွဲလိုက်ပြီးမှနင်က သိပ်လောဘကြီးပြီး သိပ်လောတာကိုးလို့ ပြောဦးမယ်နော်။
ပြောနေကျအဲ့ဒိနှစ်သိမ့်စကားကိုပဲ နင်ကထပ်ခါတလဲလဲပြောလွန်းရင်လဲ ငါကမကြိုက်ပြန်ဘူး၊ငါကတစ်ခါ
ပြန်လာတိုင်းတစ်ခါ အသစ်အသစ်သောမကျေနပ်မှု၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေနဲ့ တုန်ရီနေသလောက် နင်ကတော့
တခါလာလဲဒီစကား၊တခါလာလဲ ဒီစကားပဲ နဲ့နှစ်သိမ့်လွန်းတော့ငါစိတ်တိုတာပေါ့မောင်ရယ်။ငါအပြစ်တင်ရင်
တော့ ငါကနင့်လိုမှစကားမတတ်တာ ငယ်ရယ်လို့..နင်ခပ်လေးလေးညည်းညူဦးမယ်........။ဒါပေမယ့်
ငါကအဲ့ဒိမရိုးနိုင်တဲ့စကားလေးကိုပဲ နားထောင်ချင်လို့ နင့်ကိုစောင့်နေခဲ့တာပေါ့မောင်။
နင်မြန်မြန်လာပါတော့နော်။ငါ ဒီမိန်းမကြီးတွေရဲ့ စကားသံကိုလဲ ထပ်ပြီးမကြားနိုင်တော့ဘူးမောင်။
အောက်ကဆိုတော့ ငါအကုန်ကြားနေရတယ်လေမောင်…။သြော်နောက်ပြီးတော့ မောင်ရေ..ငါနင့်ကိုမေးဦးမယ်။
ငါ့အမေကို ငါဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ ငါ့အခြေအနေကိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုတာနင့်စိတ်ကူး
ဟော တွေးရင်းကပဲ မောင်လာနေပြီ။အင်း..ခုမှ မောကြီးပန်းကြီးနဲ့…စက်ဘီးကိုနင်းချလာလိုက်တာ၊
"ဟေ့ ငါနောက်ကျနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဘာလို့အစောကြီးလာစောင့်နေရတာလဲ..၊
" အော်မောင်ရယ် နင်က နင့်စီးပွားရေးနဲ့လေ။ငါလာခေါ်လိုက်လို့မှ နင့်ဖောက်သည်တွေလွတ်ကုန်ရင် ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ"ဆိုတော့ "အံမယ် ..မယ်မင်းကြီးမ ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်က လေသံတွေ ရန်ကုန်မှာပဲ
ထားခဲ့ပါဗျာ၊ကျုပ်တို့ဆီတော့ သယ်မလာပါနဲ့" တဲ့။"ကျုပ်တို့ဆီမှာ အချိန်ကဖောဖောသီသီပါပဲ" တဲ့။
အဲ့ဒိမောင်ကလေ..ကျမကိုခနဲ့ဖို့ စကားကိုဆို သိပ်ပြီးနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတတ်တော့တာ။
အပြောခံရပေမယ့် နားခံသာအောင်လဲ သူပဲပြောတတ်ပ့ါကွယ်။" အေးပါ မောင်ရယ်…ငါတစ်ယောက်ထဲ
ထိုင်နေချင်တာကြောင့်လဲပါပါတယ်။ဒါကြောင့် ငါဝင်မခေါ်ခဲ့တော့တာ " ဆိုတော့မှ သူပြုံးလာတယ်။
နောက်ပြီးတော့ စက်ဘီးပေါ်ကခုမှဆင်းဖို့သတိရသလိုနဲ့ ပြာပြာသလဲဆင်းပီး စက်ဘီးကိုဒီအတိုင်း
ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီးဘေးမှာ မှီရပ်ထားလိုက်တယ်။"မောင်" ….ကျမတချက်ခေါ်လိုက်တယ်။
"ပြော…ဘာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပြီလဲ " တဲ့…။"ငယ့်မျက်လုံးတွေက ပိုပြီးကြောင်စီစီဖြစ်လာတယ်နော်..တဲ့။
ဘာလဲ ညတုန်းကပြန်လာခါနီးကို အတွေးနယ်ချဲ့ပြီးကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရဘူးလားတဲ့။ပြောတော့ မောင်ရယ်၊
နင်က ငါ့အကြောင်းအကုန်သိပြီးသားပဲ။နင်ပြောပြီးရင်တော့ ငါပြောချင်တာလေးတွေပြောပါရစေနော်။
ငြိမ်သက် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာပြီးတော့ ကျမစိတ်ကူးထားတဲ့၊ကျမရဲ့အမောတွေကိုဖွင့်ချလိုက်ပြီးပြီ။ကျမမှာ ပြောစရာစကားတွေကုန်သွားခဲ့ပြီ။မောင်က သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကို ကျမမသိအောင်တိုးတိုးလေး
နင်အဲ့လိုသက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်တာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေမလဲ။တော်ပြီ ငါဆက်မစဉ်းစား
ချင်တော့ဘူး။ခွင့်လွှတ်ပါ...မောင်..။ငါကနင့်အတွက် ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားပေးနိုင်ခဲ့သေးဘူးနော်။
အဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက်လဲငါကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်၊နင်ကလေ ဘယ်တုန်းကမှ နင့်အတွက်ဆိုတာမျိုး
ငါ့ဆီမှာမတောင်းဆိုခဲ့ဘူးနော်။နင်က နင့်ဘ၀နဲ့နင် အဆင်ပြေအောင်နေတယ်တယ်။နင်လုပ်နိုင်သလောက်
နင်က ငါ့ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ငါက နင့်ဆီပြန်လာမယ်ပြောပြီး နင့်နဲ့ဝေးရာကို သွားမှန်းမသိ၊သွားမှန်းမသိသွားနေခဲ့မိတယ်...။ဒါပေမယ့်နင်ကတော့ငါ့ကို ခုချိန်ထိဖေးမတုန်း၊ခုချိန်ထိ
နင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ ငါ့ပါးစပ်တွေက စေးကပ်နေကြတယ်။နင်ကလဲကြိုက်မှာ
မဟုတ်ဘူးလေ။သေချာတဲ့စကားတစ်ခွန်းတော့ ငါနင့်ကိုပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါက ငါနင့်ကို ဘယ်တော့မှ
ခွဲမသွားဘူးဆိုတာပဲ။ခုခွဲနေရတာကလဲ အခိုက်အတန့်လေးပဲလို့ ငါပြောချင်သေးတယ်။ဒါပေမယ့်
အဲ့ဒိအခိုက်အတန့်လေးတွေက ဘယ်လောက်ထိကြာသွားမလဲဆိုတာတော့ ငါလဲမသိသေးဘူး။သိလဲမသိချင်ဘူး
ကဲမောင်ပြန်ကြရအောင်နော်…မိုးချုပ်တော့မယ်၊အမေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ် ဆိုတော့ နင်ကခပ်ယဲ့ယဲ့လေးပြုံးတယ်။
နင့်အပြုံးကို ငါမို့လို့ ဖမ်းမိလိုက်တာ၊တခြားသူတစ်ယောက်ဆိုသိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ဟင့်အင်းနင်အဲ့လိုမပြုံးပါနဲ့
စက်ဘီးနားကိုသွားရပ်လိုက်ပြီး " ပြန်မယ်လေ..လာ ငါလိုက်ပို့မယ် "တဲ့…။
"မောင်..တစ်နေ့နေ့ကျရင်တော့ ခုနင်လိုက်ပို့မယ်အိမ်ကို နင့်ကိုအပါ ငါခေါ်သွားမယ်သိလား၊အဲ့အခါကျမှ နင်ရှက်မနေရဘူးနော်…."လို့ကျမစိတ်ထဲကပဲပြောလိုက်မိတယ်။
သူက ကျမနဖူးပြင်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးထိကပ်လိုက်တယ်..။နောက်ပြီးတော့မှ လေသံသဲ့သဲ့နဲ့...........
ဆုံးခမ်းတိုင်အောင် ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမမျှော်နေတာက ဝေဖန်အကြံပေးတဲ့စကားသံများပါ။
posted by mirror time 4:20 PM9comments
posted by mirror time 2:07 PM 16 comments
posted by mirror time 10:28 PM6comments
၂၀၀၉ ခုနှစ်သည် ဘလောဂ့်ရပ်ဝန်းတွင်သာမက မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားအားလုံးရဲ့ တူညီသောမျှော်လင့်ချက်များ ပြည့်ဝစေသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။